CBE, ihe ngosi ahia CIPM na-abịa, kwadebe. Onye isi oche.Mr.Zhang Eprel. 19
Na Mee nke afọ a, e nwere ihe ngosi ụlọ ọrụ abụọ dị mkpa, otu bụ CBE Shanghai Expo Expo site na Mee 12 ruo 14, na nke ọzọ bụ Qingdao National Pharmaceutical Machinery Expo site na Mee 10 ruo 12. N’abalị Mọnde, ndị otu ahịa zukọtara ọnụ, na Onye isi ala Zhang nke ...
S605 Vetikal Nri kwụ Labeling System Turnkey Nyefe – Shell-Conning, Eprel 16, 2021
S605 Vertical Feeding Horizontal Labeling System Turnkey Delivery - Shell-Conning, Eprel 16, 2021 Ndị ahịa si G Provincial Bio-medical Institute nyere ikike ịnyefe S605 mgbe nyochachara nke ọma na onye isi oche nke Shell-Conning Mr. ..
Databridgemarketresearch.com na nchekwa data agbakwunyere "COVID-19 Ngwa ahia nzipu ahia ahia ahia ahia na amụma banyere 2028". Report obosara peeji: 350 ndịna: 60 tebụl: 220 Ibé akwụkwọ. The COVID-19 ọgwụ nnyefe ngwá ahịa na-akọwa ụlọ ọrụ zuru ezu ele ihe anya t ...
Ngụgụ ụbọchị 8! S-conning na-akpọ gị òkù ka ị gaa Shanghai CPhI & P-MEC China!
Ngụgụ ụbọchị 8! S-conning na-akpọ gị òkù ka ị gaa Shanghai CPhI & P-MEC China! P-MEC China, ihe ngosi mba ụwa na-ejikọta ụdị ndị na-eduga mba ụwa na ụlọ ọrụ ndị ama ama na mpaghara, ga-enwe na Shanghai New International Expo Center si Decem ...
Nmepụta onwe nke onwe, na-ebugharị S400 usoro tripod maka sirinji enwere ike iwepụ • Ndenye akpaka & plunger nzukọ Nnọọ ọsọ ọsọ: 400pcs / nkeji; • agịga tube denesting, push mkpanaka nri, torsion mmanya & labelụ kọmpat Ọdịdị na ...
Gị turnkey nwere ọgụgụ isi labeling ngwọta na-eweta S-conning Tech. ugbu a na-enye ọrụ a haziri ahazi dị elu!
Gị turnkey nwere ọgụgụ isi labeling ngwọta na-eweta S-conning Tech. ugbu a na-enye ọrụ a haziri ahazi dị elu! S-conning Tech otu LTD bụ a na-eduga ígwè emeputa, ebe ọ bụ na 2009. eringchụ a echiche nhọrọ: Labeling igwe an ...
Label Applicator Machine N'ihi igbe, Top na ala Labeler, Sirinji Syringe na nyocha usoro, Plastic akara igwe, Label Printer N'ihi Ngosiputa ite karama, Commercial Bottle Labeling Machine,